माओवादी जनताको साथी हो, नीति र नेतृत्वको जिम्मा लिन तयार छः अधिकारी (अन्तरवार्ता) | KTM Khabar
२०७३ चैत्र २३ गते १६:५६ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । १९ बर्ष पछी हुन लागेको स्थानिय निकायको चुनाबी रौनक यति बेला चिया पसल देखि उच्च स्थानसम्म बहसको विषय बन्न थालेको छ । ०७४ बैशाख ३१ मा हुने भनिएको चुनावमा यति बेला कसलाई उम्मेदवार बनाउँने भन्ने विषयमा विभिन्न दलका नेता, कार्यकर्ताहरु केन्द्रित रहेका छन् भने यसमा सबैको चासो बढेको छ । यस्तै राजधानीको उत्तरी भेगमा रहेको बुढानिलकण्ठ नगर पालिकामा पनि निर्वाचनको पुर्वसन्ध्यामा उम्मेदवारीको विषयमा कसको उम्मेदवार को रहला ? भन्ने कुरामा धेरैको लागि चासोको विषय बन्न थालेको छ ।
यी यावत चुनाबी गतिविधिलाई समेट्दै यत्ति बेला माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो क्रियाशिलता अगाडी बढाईरहेको छ । वडा गठन देखि नगर गठनसम्म गरि सकेको छ । नगर कमिटिका अध्यक्ष भएका छन् रविन अधिकारी । उनै अधिकारीसंग केटिएम खबरले विशेष भिडियो कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ केटिएम खबरका लागि श्याम कार्कीसंग गरिएको कुराकानीको अंशः
माओवादी केन्द्रको बुनपा नगर कमिटिको नेतृत्व दिईरहनु भएको छ, यत्ति बेलाको व्यस्तता कता तिर छ ?
अहिलेको स्थानिय निकायको चुनाबलाई मध्यनजर गर्दै प्रत्यक वडाहरुमा वडाका अध्यक्ष लगायत दुई जना पुरुष सदस्य, एक जना महिला सदस्य र एक जना दलित महिला सदस्य छान्ने प्रक्रियमा नै व्यस्त छु । हामीमा १३ वडा रहेको छ । प्रत्येक वडाबाट उम्मेदवारीका लागि प्रस्तावित नामहरु नगर कमिटिमा जम्मा हुँदै छन् । त्यी प्रक्रियालाई अगाडी बढाउँदै छु । नगरको प्रमुख र उप–प्रमुखको पनि यहि २५ गते भित्र हामीले जिल्ला पार्टीमा बुझाई सक्नु पर्ने भएकाले अहिलेको व्यस्तता खास त्यतै तिर केन्द्रित गरेको छु ।
माओवादीको हिजोका दिनहरुको गतिविधिहरुबाट आजसम्म नगरबासीले के पाए ?, अब त समिक्षा गर्ने बेला पनि आएको छ, के भन्नु हुन्छ ?
पहिलो कुरा त मलाई बुढानिलकण्ठ नगरपालिका जति बेला बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको नयाँ नाम लिएर अगाडी आयो त्यतिबेला देखि नै पार्टीले विश्वास गरेर पार्टी प्रतिनिधि र सहजीकरण सदस्यमा पठाएको कारणले नजिकबाट बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको भुगलको कुना–कुनासम्म पुग्ने अवसर पाए र नियाले । त्यसैले अब मलाई थाहा छ बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको कुन वडामा के चाहीँ गर्दा त्यी वडाहरुको विकास, उन्नत छ । जनसंख्याले मात्र नभएर अब चाहीँ उन्नत नगरपालिका बनाउँनका लागि के कस्ता योजनाहरु हाल्न सकिन्छ भन्ने अध्यनमा व्यस्त छु । जसरी बुढानिलकण्ठ नगरपालिकालाई बुझ्ने मौका पार्टीले दियो । त्यसका लागि आभारी पनि छु र आफ्नो कर्तव्य यहाँका जनताहरुलाई उच्च, निच नसम्झि को आफ्नो, को पराई भन्दा पनि जनताको मुख्य समस्या के हो ? भनेर पनि पहिल्याउँन लागि रहेको छु ।
यहाँले लामो समय देखि राजनीतिमा क्रियाशिलता दिईरहनु भएको छ, आम मासिहरुको प्रतिनिधित्व आवाज बनि रहनु भएको छ, मुलतः नगरबासीहरुले के चाहन्छन् र माओवादी केन्द्रले के गर्दै आएको छ ?
नगरबासिहरुको असिमित इच्छाहरु छन्, समस्याहरु छन् । खास समस्या के हो ? र यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? भनेर करिब–करिब अध्यन गर्ने मौका पाएको छु । यो कुरा मैले पुर्व–उद्घोष पनि गरि सकेको छु । माओवादी केन्द्रका श्रद्धय अध्यक्षले जुन आफ्नो भिजन नेपालमा ल्याउनु भएको छ । त्यसले गर्दा हामीलाई सजिलो पनि बनाएको छ । जसले गर्दा हामी अब नयाँ योजनाका साथ जनतासंग जादै छौँ । “जनताको घर–घरमा माओवादी यानकि जनताका साथी माओवादी” भन्नुको अर्थ के हो भने जुन जनताको बोेल्दिने कोही छैनन् अब माओवादीले पक्कै बोल्दिन्छ र विशेष समस्या के हो ? कार्यलयमा बसेर जनताको समस्या पहिचान हुदैन र जनताको घर–घर जानु पर्छ र जनताको घर–घर गई सके पछी सामुहिक समस्या के हो ? भनेर हामीलाई जति अरु कसैलाई थाहा नहोला । त्यसैको कारण मलाई लाग्छ माओवादी केन्द्रलाई एक चोटि जनताहरुले अब बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका हुँदै गरेका नागरिकहरुले पुर्णत विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
बुनपा माओवादीले उम्मेदवारहरुको नाम कहिले घोषणा गर्दै छ ?, यत्ता–कत्ता बुनपा मेयर उम्मेदवारका लागि तपाईको नाम आउँदै छ भन्ने कुरा सुनिन्छ, के भन्नुहुन्छ ?
त्यो त कस्तो रह्यो भने हाम्रो पार्टीले अहिले नै उम्मेदवार यो हो भनेर चयर गरि सकेको अबस्था हैन । हामीले पार्टीको नीति भन्दा बाहिर बोल्नु पनि मिल्दैन । नगर अध्यक्षको हैसियतले प्रमुख कुरो के हो भने पार्टी एकताबद्ध रुपले सकिन्छ भने सिंगल नाममा, सकिदैन भने पार्टीले दिएको कार्यतालिका अनुसार र एउटा सिमित ठाउँ छ । त्यस अनुसार हामीले वडाबाट उम्मेदवार छान्ने अवस्था करिब–करिब सकि सकेका छौँ र मेयर र उप–मेयरको हिसाबमा पनि बढीमा तिन जनाको नाम जिल्लामा पठाउँछौ । मलाई लाग्छ जिल्लाले प्रदेशमा पठाउँछ र पछी त्यहाबाट निर्णय भएर आउँछ । मेरो हिसाबले भन्नु पर्दा १९ बर्ष पछी हुन लागेको स्थानिय निकायको यो निर्वाचनमा मेरो नाम भए हुन्थ्यो भन्ने त लागेको छ तर जसको नाम आए पनि हामीले एकताबद्ध भएर माओवादी केन्द्रको भिजनलाई पुरा गर्न लाग्ने छौँ ।
चुनाबी मैदानमा अरु पार्टीहरु छन्, सबैले राम्रो कुरा गर्छन् नै तर यहाँहरु राम्रो भन्नका लागि नगरबासीहरुले मुल्यांकन गर्ने आधारहरु चाही के छन् ?
असाध्यै सान्दर्भिक प्रश्न, त्यसका लागि धन्यवाद पनि । अरु पार्टीहरुले गर्ने गतिविधिलाई यहाँका जनताहरुले राम्रोसंग नियालेका छन् र अब माओवादी केन्द्रले गर्ने नगरका योजनाहरुको बारेमा करिब–करिब बुनपाका जनताहरुले त्यति बुझ्ने मौका पाईरहनु भएको छैन । त्यसैले पनि हाम्रो एजेण्डा भनेको नै जसको नीति, उसैको नेतृत्व भन्ने हो । जसले गर्दा हामीले बनाएको एउटा नीति अरुले प्रयोग गर्दै गर्दा नुन नपुगेको तरकारी जस्तो हुन्छ ।
रविन अधिकारीसंगको थप कुराकानी तथा भिडियो कुराकानी हेर्नका लागि तलको युटुब लिंकमा जानुहोसः